I-recipe Shchi kunye nomnxeba "I-Sprat kwi-tomato"
Shchi kunye ne-sprats kwi-tomato Isobho seklabishi esinezikhwebu ezinomthi otywebileyo kwi-tomato sauce, inhlanganisela engahambelaniyo yezithako zesobhobe, nangona kunjalo le recipe iye yazingca kwiintlobo ezininzi. Kukho enye indlela yokulungiselela lo kutya - kunye nokudibanisa kweembotyi, ngoko kuvela kwaye kunelisekile. Loo msoco ungcono ukuba ungashushu, kodwa sele sele ucolile kwaye utshitshisiwe.
Iklabishi emhlophe 0.5 pcs.
Ioli ye-sunflower engafaniweyo 75 ml
Ukutya okusemathinini "I-Sprat kwi-tomato" 1 inako
I-anyanisi 1 g
Inyathelo 1 Ukulungiselela isobho seklabishi kunye neklabishi ekhatywayo sidinga iklabishi emhlophe, iitatayi, anyanisi, i-karoti, i-pepper e-sweet, i-tomato, "i-Kilka kwiitamatato", i-parsley entsha, ioli, i-oyile kunye nompompo omnyama.
Inyathelo 2 Iitapile ezicocekileyo uze uthathe iikhabhi, susela. Kwibhodeni, galela amanzi, uphonsa amazambane kuyo, uyibeke emlilweni omkhulu, vumela amanzi aphephe, anciphise ubushushu kumncinci aze apheke, asigubungele ngesiqhekeza.
Inyathelo lesi-3 Okwangoku, i-anyanisi kunye nee-karoti zihlambulukile, i-pepper yimi, ikhululekile ngeesahlulo zangaphakathi kunye nembewu. Sinqumle imifuno ibe ngamabhubhu amancinci.
Inyathelo 4 Kwisitya sokucoca uthele ioli yelanga, yidlulise imifuno de iinqwelo ezinqabileyo.
Inyathelo 5 Utamatisi, ususe esikhumbeni, uthathe ii cubes. Yongeza kwimifuno ethosiweyo kunye no-Fry kuqala ekushiseni okuphezulu, ngoko siza kululela kude kube yiphunga lesantathu.
Inyathelo 6 Hlanganisa isipro kunye nomsila we-tomato. Ukumisa ngomlilo ocothayo malunga nemizuzu emi-5.
Inyathelo 7 Iklabishi ecocekileyo emhlophe, yiphalazele epanini ukuze ufumane amazambane olungiselelwe ngokupheleleyo. Sinika amanzi ukuba abilise, siwutyule kunye nokutshintsha malunga nemizuzu engama-5, ngaphandle kokumboza ngesiqhekeza.
Isinyathelo 8 Emva koko fakela i-pan kwi-pan. Sipheka malunga nemizuzu engama-7.
Isinyathelo 9 Gaya i-parsley eluhlaza, engeza kwisobho, i-pepper kwintle yakho, xuba kwaye ususe ipeni emlilweni.
Inyathelo le-10 Makhele kwaye sisebenzise itafile njengesiqongo sokuqala sasemini.
Isaladi neentsuku zebhontshisi
I-kebab ehlukahlukeneyo esuka kwimifuno ene tofu
Iklabishi igqithisa nge-shrimps kwi-lettuce kunye namagqabi olwandle
Uluhlaza kwintyatyambo kunye namazambane kunye neerari
Bavela phi abantwana beenkwenkwezi zaseRussia?
Isaladi yeDessert "Uslada"
AmaSandwich ne-shrimp unamathela
Isikhumbuzo nge logo njengesipho